Saturday June 02, 2018 - 20:00:57 in Wararka by Super Admin
War bixin kadib, waxaa si gaar ah looga wareystay weeraradii waaweynaa ee ka kala dhacay degaanka Moqakori ee gobolka Hiiraan iyo degaanka Balli Khadar ee gobolka Bari.
Ugu horreyn waxa uu ka sheekeeyay dhacdadii Moqakori isagoo xusay iney halkaasi ku dileen askar badan, si gaar ah inta ay iyagu kor istaageen meydadkooda oo ay arkeen ayaa wuxuu sheegay iney ahaayeen ku dhawaad 50 halka dhaawacoodu uu boqol kor u dhaafay.
Intaa waxa dheer oo uu sheegay iney askartaasi ka furteen hub iyo gaadiid ay soo siisay Xabashida Itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafayba ku adeeganaysay.
Sidoo kale, afhayeenka oo su’aalo laga weydiiyay weerarkii Balli Khadar ee duleedka Boosaaso, ayaa waxa uu sheegay inuu dhacay xalay abaaro afartii saac ee habeennimo ayna halkaasi ku dileen 5 askari, kulana wareegeen hub iyo qanaa’im kale.
Abu Muscab wuxuu sheegay in askarta lagu weeraray Balli Khadar ahaayeen ciidanka Saracen, kuwaasoo dhawaan meesha soo degay.
Mar wax laga weydiiyay sababta ay bishan Ramadaan u laba jibaareen hawl gallada, ayaa waxa uu sheegay in aysan ku gaar ahayn bishan, dagaalkuna uu horey u socday, dhanka kalana ay uga dayanayaan Nabigeena Muxamad SCW, oo bil ramadaan duullaano qaaday.
Ugu dambeyntii wuxuu farriin u diray ciidamada Soomaalida ah ee shisheeyaha la hawl gala, oo uu maalmahan khasaarahoodu aad u badnaa. Wuxuu u sheegay iney ka baxaan safka shisheeyaha kana towbad keenaan, isagoo u ballan qaaday iney si wanaagsan usoo dhaweynayaan askari kasta, una lacageynayaan wixii uu lasoo goosto hub iyo gaadiid intaba.
Halkan ka degso Shirka Jaraa'id Ee Abuu Muscab ama Hoos ka dhageyso
Baarlamaanka Itoobiya oo kala diray dowlad deegaanka Tigray.